Fantsona vy tsy misy lamina tsara
API 5LGr.B Sodina tsipika miloko mainty
Fantsona vy tsy misy vy vita amin'ny galvanez
Sodina miendrika manokana
Pipe seamless cylinder hydraulic
FAHALALANA vy - FAMPISEHOANA SY FAMPIHARANA NY RODS CK45 CHORME PLATED.
Ny endri-javatra sy ny fampiharana ny CK45 chrome-nopetahany takela-bato: Rehefa ny chrome-nopetahany takela-bato hetsika iharan'ny enta-mavesatra ivelany, dia tsy mitsaha-mitondra ny hetsika ny tadivavarana adin-tsaina eo amin'ny mihodinkodina na ny baolina. Rehefa tonga amin'ny fetra iray ny adin-tsaina, dia misy fahasimbana amin'ny havizanana eo amin'ny faritra mihodina, ...
Ny maha samy hafa ny BK, GBK, BKS, NBK amin'ny vy.
Ny maha samy hafa ny BK, GBK, BKS, NBK amin'ny vy. ABSTRACT: Ny fametahana sy ny fanamorana ny vy dia fomba fitsaboana hafanana mahazatra. Tanjona fitsaboana hafanana mialoha: hanafoanana ny lesoka sasany amin'ny banga sy ny vokatra semi-vita, ary manomana ny fandaminana amin'ny ririnina mangatsiaka manaraka ...
VAOVAO INDRINDRA: TOMBONY SY TEKNOLOHIAN'NY FAHATONGAVAN'ANDRIAMANITRA.
nataon'ny admin tamin'ny 21-10-13
Loharano: My steel Oct 13, 2021 ABSTRACT: Cold Drawn Seamless Mechanical Tubing (CDS) dia fantsona vy vita amin'ny mangatsiaka izay manome fandeferana fanamiana, manatsara ny machinability ary mihamitombo ny hery sy ny fandeferana raha oharina amin'ny vokatra mafana. Novokarina avy amin'ny hot rolled, ny dingana fanaovana sary mangatsiaka ao...
VAOVAO IRAISAM-PIRENENA: Nidina ny ankamaroan'ny vidin'ny vy any ivelany nandritra ny fetim-pirenen'i Sina tamin'ny taona 2021.
nataon'ny admin tamin'ny 21-10-09
Loharano: My steel Oct 09, 2021 ABSTRACT: Nandritra ny fetim-pirenena sinoa (1 OCT – 7 OCT), nihena ny hafainganam-pandehan'ny varotra vy any Azia. Niakatra hatrany ny vidin’ny akora, vy potika, saribao ary vokatra hafa, izay nitarika ny fikojakojana vy nampitombo ny mpitari-dalana azy ireo p...
VAOVAO TOP ISAN'ANDRO: FAMPIANARANA NY Tsenan'ny vy amin'ny volana OKTOBRA
nataon'ny admin tamin'ny 21-09-30
Mankalaza ny faha-72 taona niorenan'ny Repoblika Entim-bahoakan'i Sina. Loharano: My steel Sep30, 2021 Fetim-pirenena Shina: 1 OCT ka hatramin'ny 8 OCT, ny orinasanay dia manohy manome serivisy an-tserasera ho an'ny mpanjifa hajainay, miarahaba ny rehetra handefa fanontaniana sy amin'ny...
Tatitra momba ny indostrian'ny vy ao Shina – ny politikan'i Shina sy ny fiantraikan'ny famerana ny herinaratra sy ny famokarana any amin'ny faritra samihafa.
Ny politikan'i Shina sy ny fiantraikan'ny famerana ny herinaratra sy ny famokarana any amin'ny faritra samihafa. Loharano: My steel Sep27, 2021 ABSTRACT: Faritany maro ao Shina no tratran'ny vanim-potoana faratampony amin'ny fanjifana herinaratra sy ny “fifehezana roa ny fanjifana angovo”. Vao haingana, ny herinaratra...
VAOVAO IRAY IRAISAM-PIRENENA: Navoakan'i Arzantina ny didim-pitsarana farany momba ny fametahana vy karbaona ao Shina.
Navoakan'i Arzantina ny didim-pitsarana farany momba ny fametahana vy karbônina ao Shina. Loharano:Mysteel Sep24, 2021 ABSTRACT: Espaniola: accesorios de cañerías para solder a tope (fittings) -codos, afa-tsy ny codos de 180° y codos de reducción, y tes- de aceros al carbono, en v...
FANAMPIM-PANAZAVANA IRAISAM-PIRENENA: Nanapa-kevitra i India fa hametraka adidy manohitra ny fanariam-pako mandritra ny dimy taona amin'ny vokatra mangatsiaka sy mafana maromaro avy amin'ny firenena fito.
Nanapa-kevitra i India fa hametraka adidy manohitra ny fanariam-pako mandritra ny dimy taona amin'ny vokatra mangatsiaka sy mafana avy amin'ny firenena fito. Loharano：Mysteel Sep22, 2021 Namoaka angon-drakitra tamin'ny 15 septambra ny Minisiteran'ny Indostria sy ny Varotra India izay mampiseho fa taorian'ny filentehan'ny masoandro ny saran-dalana, India...
INFORMATION INTERNATIONAL: Tokyo Steel dia mihodinkodina amin'ny vidin'ny vy karbaona amin'ny varotra Oct
nataon'ny admin tamin'ny 21-09-14
Tokyo Steel dia manodina ny vidin'ny vy karbaona ho an'ny varotra okt Loharano：Mysteel Sep 14, 2021 ABSTRACT: Tokyo Steel Manufacturing, mpamokatra lafaoro elektrika-arc-furnace lehibe any Japon, dia nanambara ny 14 septambra mba hitazonana ny vidin'ny vokatra vita amin'ny vy vita amin'ny karbona tsy hiova ho an'ny varotra Oktobra, mampiasa ny iray...
VAOVAO TOP ISAN'ANDRO: Niakatra ny vidin'ny rebar any Sina, nihena 18% ny varotra vy
Niakatra ny vidin'ny rebar any Sina, nihena 18% ny varotra vy Loharano：Mysteel Sep 14, 2021 ABSTRACT: Tamin'ny 13 septambra, ny vidin'ny nasionalin'i Shina amin'ny HRB400E 20mm dia rebar tombanan'i Mysteel dia nitombo ho an'ny andro fiasana fahatelo tamin'ny Yuan 64/tonne ($9.9/tonne). t), raha ny fivarotana an-toerana ny vy fanorenana i...
VAOVAO TOP – FAMINTINANA ISAN-kerinandro: Miakatra ny vidin'ny vy any Sina, miakatra ny varotra
FAMINTINANA HERINANDRO: Niakatra ny vidin'ny vy ao Shina, niakatra ny varotra Loharano：Mysteel 13 Sep 2021 14:30 ABSTRACT: Ny vidin'ny vy any Shina eo amin'ny tsenan-toerana sy ny hoavy dia naneho famantarana ny fitohizan'ny fanamafisana tamin'ny 6-10 septambra, satria nihamafy ny sisin'ny famokarana vy tao anatin'ny herinandro. faritra maro ka izy...
NY FANONDRANANA VAOVAO VOALOHANY Eran-tany - 10 SEP
nataon'ny admin tamin'ny 21-09-10
HERINANDRO: Nidina ny tahiry vy tao Shina nandritra ny herinandro faha-3 Loharano: Mysteel 10 septambra 2021 09:00 \_ ABSTRACT: Nihena ny tahiry amin'ireo vokatra vy lehibe dimy vita amin'ny orinasa vy sinoa 184 nalaina tamin'ny fanadihadiana isan-kerinandro nataon'i Mysteel nandritra ny herinandro fahatelo tamin'ny 2 septambra. -8, indrindra noho ny famerenana tsikelikely...
NY TONGA MANONDRANANA VAOVAO VOALOHANY.
INFOGRAPH: Nihena ny vidin'ny vy noho ny fangatahana kely Loharano: Mysteel Sep 09, 2021 14:01 ABSTRACT Ny vidin'ny akora vy avy any Sina sy ny vidin'ny akora nafarana dia nivadika vao haingana, izay tsy nahagaga ny tsena, noho ny fanatsarana ny fangatahana vy amin'ny . ..
Fitakiana takelaka fantsona solika sy gazy.
nataon'ny admin tamin'ny 21-08-31
Sasin-teny ity fenitra ity dia narafitra araka ny fitsipika nomena ao amin'ny GB / t1.1-2009. Ity fenitra ity dia manolo ny takelaka vy lehibe sy matevina GB / t21237-2007 ho an'ny fantsona fandefasana solika sy entona. Raha ampitahaina amin'ny GB / t21237-2007, ny fiovana ara-teknika lehibe dia toy izao manaraka izao: ——- nanova ny haavon'ny hatevin'ny...
Ny ho avin'ny vy ferrous any Shina dia nitombo be tamin'ny ankapobeny, ary mety hiakatra mafy ny vidin'ny vy.
nataon'ny admin tamin'ny 21-08-06
Nisondrotra mihoatra ny 5100 ny bileta Tangshan ao Shina, nilatsaka 4.7% ny akora vy, ary mety hiakatra sy hidina ny vidin'ny vy. Tamin'ny 5 aogositra, nitombo indrindra ny tsenan'ny vy ao an-toerana, ary ny vidin'ny billet Tangshan taloha dia nijanona tamin'ny 5,100 cny / taonina. Araka ny andrasan'ny tsena fa ny asa fampihenana ny vy...
Ny vokatra vy ao Shina dia nanampy isa 23 hetra vaovao hanafoanana ny hetra fanondranana. – Hampihatra ny 1 aogositra 2021.
Fampandrenesana momba ny fanafoanana ny hetra fanondranana ho an’ny vokatra vy : Fanambarana laharana faha-25 (2021) an’ny Fitantanan-draharaham-panjakana momba ny hetra ny minisiteran’ny Fitantanam-bola Ny fanambarana momba ny fanafoanana ny hetra fanondranana ho an’ny vokatra vy dia ambara toy izao manaraka izao: Manomboka ny 1 aogositra, 202...
Nampiakatra be ny vidin'ny orinasa vy sinoa, nampiakatra ￥40 isaky ny taonina ny vidin'ny vy.
nataon'ny admin tamin'ny 21-07-27
Ny Vaovaonao Steel: Tamin'ny 26 Jolay, nisondrotra ny vidin'ny tsenan'ny vy ao an-toerana amin'ny ankapobeny, ary ny orinasa taloha tao Tangshan dia nanangana 40 cny ho 5240 cny / taonina. Misy fiantraikany amin'ny fanamafisana ny tsenan'ny hoavy sy ny billet, ny tsenan'ny vy dia miakatra mavitrika ankehitriny. Ny faha-26, ny ankamaroan'ny fu mainty...
Nampihena ny famokarana vy manta tany amin'ny toerana maro i Shina, ary nihena ny fiakaran'ny vidin'ny vy.
Tamin'ny 15st.Jolay, nitombo ny tsenan'ny vy an-trano tamin'ny ankapobeny, ary ny vidin'ny orinasa taloha an'ny billet mahazatra Tangshan dia niakatra 20 CNY, miaraka amin'ny vidin'ny 5140 CNY / TON. Voakasik'ny fanapahana RRR an'ny Bankin'i Shina sy ny vaovao momba ny fampihenana ny famokarana vy vita amin'ny vy any amin'ny toerana maro, ny tsena dia manana fihenam-bidy matanjaka ...
VAOVAO CHINA STEEL – TATAO AMIN’NY Tsenan’ny vy any Chine – Miakatra hatrany ny vidin’ny vy any Sina.
Billet niakatra 70CNY, Futures vy vaky hatramin'ny 5400CNY, vy mbola miakatra. Tamin'ny 7st.Jolay, nisondrotra mafy ny tsenan'ny vy an-trano, ary ny vidin'ny orinasa taloha an'ny bileta Tangshan dia niakatra 70CNY hatramin'ny 5,000CNY isaky ny taonina. Tamin'ity herinandro ity, nihatsara be ny varotra vy, ny dow...
China Steel News - Nidina ambanin'ny 5,000CNY ny vidin'ny kofehy antonony, ary nitohy ny vidin'ny vy.
Nidina ambanin'ny 5,000CNY ny vidin'ny kofehy antonony, ary nihena ny vidin'ny vy. -China Steel News Tamin'ny 22 Jona, ny tsenan'ny vy an-trano dia nilatsaka manerana ny birao, ary ny vidin'ny orinasa taloha an'ny bileta Tangshanpu dia nilatsaka 50 hatramin'ny 4,800 CNY/TON. Ny fitakiana vy malemy amin'ny vanim-potoana ivelan'ny vanim-potoana, miaraka amin'ny...
Nitombo 113% ny akora vy! Ny harin-karenan'i Aostralia dia nihoatra an'i Brezila voalohany tao anatin'ny 25 taona!
Nisondrotra 113%, nihoatra an'i Brezila ny harin-karenan'i Aostralia! Amin'ny maha mpanondrana vy lehibe roa eran'izao tontolo izao, i Aostralia sy Brezila matetika dia mifaninana mangingina sy mifaninana mafy amin'ny tsena sinoa.Araka ny antontan'isa, i Aostralia sy Brezila dia miara-mitondra ny 81% amin'ny fitambaran'ny akora vy ao Shina ...
Fanambarana nataon'ny Minisiteran'ny Fitantanam-bola ao amin'ny Repoblika Entim-bahoakan'i Shina momba ny fanafoanana ny tamberim-bidy amin'ny hetra fanondranana ho an'ny vokatra vy sasany.
nataon'ny admin tamin'ny 21-04-29
Fanambarana nataon'ny Minisiteran'ny Fitantanam-bola ao amin'ny Repoblika Entim-bahoakan'i Shina momba ny fanafoanana ny hetra fanondranana ho an'ny vokatra vy sasany Namoaka fanambarana ny minisiteran'ny Fitantanam-bola sy ny fitantanan-draharaham-panjakana momba ny hetra mba hanafoanana ny hetra fanondranana ho an'ny vokatra vy sasany: Ann...
【Vaovao momba ny tsena】Angona fanapahan-kevitra momba ny fandraharahana isan-kerinandro (2021.04.19-2021.04.25)
nataon'ny admin tamin'ny 21-04-23
VAOVAO IRAISAM-PIRENENA ▲ Tamin'ny volana aprily, ny Markit manufacturin...
China Steel Price Index (CSPI) tamin'ny volana martsa.
nataon'ny admin tamin'ny 21-04-22
Ny vidin'ny vokatra vy teo amin'ny tsena anatiny dia nihena niakatra tamin'ny volana martsa, ary sarotra ny manohy ny fiakarana amin'ny vanim-potoana manaraka, ka ny fiovaovan'ny kely no tokony ho fironana lehibe. Tamin'ny volana martsa dia nahery ny fitakiana tsena anatiny, ary niakatra ny vidin'ny vokatra vy, ary ny i...
China Iron Ore Price Index (CIOPI) tatitra isan'andro tamin'ny 15 aprily.
nataon'ny admin tamin'ny 21-04-16
【China Iron and Steel Association】 CIF USD vidin'ny akora vy nafarana mivantana tamin'ny Aprily 15 (USD/TON) 65%：205.64(+2.11), ny isam-bolana dia 198.81; 62%：175.03(+2.14), ny salan'isa isam-bolana dia 169.52; 58%：143.83(+1.59), ny salan'isa isam-bolana dia 141.91; Voan'ny akora ambony: 0.5662 CNY/DMT(Dr...
China Iron Ore Price Index (CIOPI) tatitra isan'andro amin'ny 1 aprily.
【China Iron and Steel Association】 CIF USD vidin'ny akora vy nafarana mivantana tamin'ny Aprily 1 (USD/TON) 65%: 193.25(+2.33), ny isam-bolana dia 192.08; 62%: 165.16 (+1.56), ny salanisa isam-bolana dia 164.38 ; 58%: 141.31 (+1.51), ny salanisa isam-bolana dia 140.56; Voan'ny akora avo lenta: 0,5008 CNY/DMT(Maina...
Post Steel Morning isan-kerinandro.
Niakatra maherin’ny 15 dolara ny vola tamin’ny herinandro lasa teo. Nandeha toy izao ny vidin’ny vy tamin’ity herinandro ity. . . Tamin'ny herinandro lasa, nafana ny korontana famerana ny famokarana, ary ny vidin'ny tsenan'ny vy dia nivadibadika sy nihena be. Voalohany indrindra, ny tsenan'ny spot tamin'ny fiandohan'ny herinandro no tena nahaforona ny r...
Ny mpikambana Cui Lun dia nanambara tao amin'ny tatitry ny asan'ny governemanta: Tolo-kevitra ho an'ny fananganana orinasa 3 ka hatramin'ny 4 lehibe ao an-toerana amin'ny fampandrosoana ny akora vy.
nataon'ny admin tamin'ny 21-03-14
“Amin'izao fotoana izao, miparitaka be ny orinasam-pampandrosoana ny akora vy eto amin'ny fireneko. Tokony hanangana orinasa lehibe 3 ka hatramin'ny 4 lehibe i Shina mba hahafahantsika mifantoka amin'ny fanavaozana ara-teknolojia sy ny fampandrosoana maitso ny harena ankibon'ny tany. Mpikambana ao amin’ny komity nasionaly...
Niakatra 12.0% isan-taona ny PPI an'ny indostrian'ny fandoroana vy sy fanodinana vy ao Shina nanomboka tamin'ny Janoary ka hatramin'ny Febroary.
nataon'ny admin tamin'ny 21-03-12
Araka ny angon-drakitra navoakan'ny Birao Nasionaly momba ny antontan'isa ao Shina, tamin'ny Febroary 2021, ny vidin'ny orinasa nasionaly ho an'ny mpamokatra indostrialy dia nitombo 1,7% isan-taona ary 0,8% isam-bolana; ny vidin'ny vidin'ny mpamokatra indostrialy dia niakatra 2.4% isan-taona ary 1.2% isam-bolana. Amin'ny...
Sodina vy tsy misy tariby.
nataon'ny admin tamin'ny 20-12-08
1. TANDRIAMANITRA mavesatra sodina vy tsy misy rambony Tsara kokoa noho ny fantsona mahazatra ny fantsona mavesatra tsy misy rindrina. Ny voalohany dia ny firafitry ny seamless ny rindrina sodina sy ny sodina vatana dia tena malama, ary ny faharoa dia ny Stainless vy dia mahatohitra ny temperatur avo ...
FAHALALANA vy – FEATURE SY APPL...
NY maha samy hafa ny BK, GBK, BKS, NBK ...
VAOVAO INDRINDRA: TOMBONY SY TEKNOLOJIA ...
Adiresy: ROOM 1202, GUILDING XINGMEI 1, LALANA DONGCHANG, ZONA FAMPANDROSOANA ARA-TOERANA SY TEKNOLOHIKA, TANANA LIAOCHENG, FARITANY SHANDONG, CHINA.
© Copyright - 2010-2021: Zo rehetra voatokana. Vokatra mafana - Sitemap
Hot Rolled Seamless Steel Pipe, Carbon Seamless Sodina, Steel Karbonina tsy misy seam, Sa 179 Seamless Tube, Pipe hydraulic, St52 Sodina tsy misy tariby,